Komorowski table ၏ဆွဲဆောင်။
အစာ, တစ်နှစ်မှလအတွင်းအားဖြင့်မွေးဖွားထံမှကလေးတစ်ဦးအစာကျွေး / မှစ. နံရံကပျကျွွောငာ
ခြောက်လ 06: 00 - 07: -: - 00 10: 00 ရင်သားနို့ / နို့အရောအနှော 11 အဆင်ပြေအောင် 00 - ကလေးများနိမ့်အဆီဒိန်ချဉ် 150ml + ထောပတ် 30mg ** 14: 00 - 15: 00 - ရင်သားနို့ / နို့အရောအနှော 18 အဆင်ပြေအောင်: 00 - 19: 00 - ရင်သားနို့ / နို့အရောအနှော 22 အဆင်ပြေအောင်: 00 - 23: 00 - အောက်ပါအတိုင်းအဖြစ်ရင်သားနို့ / အဆင်ပြေအောင်နို့ပုံသေနည်း * Kefir ကလေးအစားအစာအစားအသောက်များတွင်မိတ်ဆက်ပေး။ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ...
Komorowski table ၏ဆွဲဆောင်။ Read more »
ကလေးတစ်ဦး 12 တစ်လနို့တိုက်ကျွေးမှု
တစ်နှစ်မှလအတွင်းအားဖြင့်မွေးဖွားထံမှကလေးတစ်ဦးအစာကျွေး / မှစ. နံရံကပျကျွွောငာ
ကလေးအာဟာရ: 1 တစ်နှစ်။ အဆိုပါကလေးငယ်ကိုမကြာမီမှာတစ်နှစ်ဟောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ သာယခုနို့တိုက်ပြီးအောင်ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မည်, သို့သော်မဖြစ်မနေမဟုတ်ပါဘူး။ သင်အလိုဆန္ဒနှင့်ဆက်လက်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည်ဆိုလျှင် - ကျန်းမာရေးအပေါ်အစာကျွေး။ ဒီအဆင့်မှာမိခင်နို့တိုက်ကျွေးအစားအစာရယူတဲ့နည်းလမ်းအဖြစ်မဟုတ်ပေမယ်လုံခြုံဟုခံစားရဖို့အခွင့်အလမ်းအဖြစ်, အိပ်ပျော်ခြင်းမှမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့တိတ်တဆိတ်ဆင်းငြိမ်သက်နှင့်ပဲဖြစ် ...
ကလေးတစ်ဦး 12 တစ်လနို့တိုက်ကျွေးမှု Read more »
ကလေးတစ်ဦး 11 တစ်လနို့တိုက်ကျွေးမှု
ကလေးအာဟာရ: 11 လအတွင်းတကျိပ်တပါးသောလကလေးအစားအစာနှစ်ခုရင်သားကင်ဆာ-နို့တိုက်ကျွေးရေး, နံနက်နှင့်ညနေပိုင်းပါဝင်သည်။ ညဥ့်တိုက်ကျွေးခြင်းမှတဖြည်းဖြည်းအရှုံးမပေးနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်နို့နို့ဟာတစ်နှစ်ကိုမှသင့်လျော်မဟုတ်ပါဘူးလုံးဝဖယ်ရန်။ ငါး, အသား, ဒိန်ခဲ, ဒိန်ချဉ်, နို့, စီရီရယ်, ဟင်းသီးဟင်းရွက်, အသီး, မုန့် - ဆိ menus တွေရဲ့ဒီအသက်အရွယ်မှာတော့ထုတ်ကုန်များ၏ပြည့်စုံအမျိုးမျိုးကိုတင်ပြ။ အစားအစာများ၏ဖွဲ့စည်းမှုမျိုးစုံ, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမအားဖွငျ့ ...
ကလေးတစ်ဦး 11 တစ်လနို့တိုက်ကျွေးမှု Read more »
ကလေးတစ်ဦး 10 တစ်လနို့တိုက်ကျွေးမှု
ကလေးအာဟာရ: 10 လ။ အစားအစာဆယ်ကလေးကဒီအသက်အရွယ်မှတဖြည်းဖြည်းမိတ်ဆက်ထုတ်ကုန်များမြင့်မားမတူကွဲပြားမှုရှိပါတယ်။ သင့်ရဲ့တာဝန်စိတ်ကူးယဉ်ထည့်သွင်းရန်နှင့်၎င်းတို့၏ပြင်ဆင်မှု၏ကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းကို အသုံးပြု. ထိုသူငယ်၏အစားအသောက်များတွင်မျိုးစုံရန်ဖြစ်ပါသည်။ အိပ်စက်ခြင်း (အနည်းဆုံးနှစ်ကြိမ်) - မိခင်နို့တိုက်ကျွေးပါတီအား mode မှာရောက်နေပါတယ်။ နယူးထုတ်ကုန် - ကရာသီအတွက်သစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အသီးတှငျရငျ့မှညျ့လိုအပ်သောလျှင် ...
ကလေးတစ်ဦး 10 တစ်လနို့တိုက်ကျွေးမှု Read more »
ကလေးတစ်ဦး9တစ်လနို့တိုက်ကျွေးမှု
ကလေးအာဟာရ:9လ။ ကိုးလရင်သားနို့၏အသက်အရွယ်မှာနေတုန်းပဲသင့်လျော်သောနှင့်အသုံးဝင်သည်, ဒါပေမယ့်ပထမဦးဆုံးဌာန၌ရှိသည်မဟုတ်သငျ့သညျ။ ကျနော်တို့အစအနတွေနဲ့ထုတ်ကုန်အသစ်တွေမိတ်ဆက်ဖို့ဆက်လက်။ ငါးမိတ်ဆက်ပေး။ ဒါဟာပြုတ်ပိန်ငါးသမုဒ္ဒရာဇာစ်မြစ် (Pollock, hake, ကော့) သို့မဟုတ်မြစ် (ပိုက်, ငါးကြင်း) သုံးစွဲဖို့ သာ. ကောင်း၏။ ငါ့အရေအေးထဲမှာငါးနှင့်အမျှပြုလုပ်ချက်ပြုတ်မတိုင်မီစိမ် ...
ကလေးတစ်ဦး9တစ်လနို့တိုက်ကျွေးမှု Read more »
ကလေးတစ်ဦး 8 တစ်လနို့တိုက်ကျွေးမှု
ကလေးအာဟာရ: အသက်ရှစ်လအတွင်း 8 အစိုင်အခဲအစာအာဟာရအစားအသောက်ပေါ်မှာရှိသမျှနို့တိုက်ကျွေးမှုအစားထိုးပြီးသားဖြစ်နိုင်ပေမယ့်လုံးဝနို့တိုက်ဖွင့်ပေးဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ ဒါဟာနို့တိုက်ဘို့နံနက်နှင့်ညနေပိုင်းနို့တိုက်ကျွေးခွင့်ပေးဖို့အကြံပြုလိုတယ်။ အဆိုပါ 8 လအတွင်းသင်သည်ဟင်းသီးဟင်းရွက်သို့မဟုတ်သစ်သီးသည်အတူ Multi-ဂျုံယာဂုနှင့်ပင်ပန်းကြမ်းတမ်းကိုသုံးနိုင်သည်။ Cook ကနို့နှင့်အတူဂျုံယာဂု, ရေသို့မဟုတ် ...
ကလေးတစ်ဦး 8 တစ်လနို့တိုက်ကျွေးမှု Read more »
ကလေးတစ်ဦး7တစ်လနို့တိုက်ကျွေးမှု
ကလေးအာဟာရ: ကလေးတစ်ဦးရဲ့အစားအစာအတွက်ခုနစ်လ7လအတွင်းအသက်အရွယ်ကွဲပြားခြားနားဆွဲဆောင်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ပိုပြီးခက်ခဲဖြစ်လာနေသည်။ ကျနော်တို့ဒိန်ခဲ, အသား, ငါးငံပြာရည်, crackers တွေ, cookies, မုန့်ကြိုးစားရန်စတင်။ ဖြည့်စွတ်အစားအစာများ၏နိဒါန်းများအတွက်အဓိကအကြံပြုချက်များအတူတူပါပဲ - တဖြည်းဖြည်း; - ရှင်းလင်းစွာသူငယ်၏တုံ့ပြန်မှုကိုယျခန်ဓာကိုခြေရာခံနိုင်ထုတ်ကုန်အသစ်တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာ (သုံးမယ့်အချိန်က ...
ကလေးတစ်ဦး7တစ်လနို့တိုက်ကျွေးမှု Read more »